Odeessa qabatamaa damee tikaa mootummaa keessaa bahe – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOdeessa qabatamaa damee tikaa mootummaa keessaa bahe
Odeessa qabatamaa damee tikaa mootummaa keessaa bahe kana akkuma jirutti qalbiin dubbisaa
“Yaya akkam jirtu?
Dhimaa Shaneen hogaansa ajjeese gidirsee, birrii saamee, nama akkas godhe jedhu kan diraamaa akka ta’ee ani akka nama caasa nageenyaa keessa jiruutit na qanessa. Duraan dursa hanga dhiyotti obsaa turre. Amma garuu nu jibisiiseera. Abbaa Torbee lamatu jira. Tokko isuma qabsa’otaati. Inni kaan yaroo Damballash casaa nageenya Oromiyaa gaggeessu sana ijaarramani. Ijoollee waraana keessa namusaan arayaman walitti qabee ijaare. Abbaa torbe Motumma magalota gurgguddaa Oromiyaa hunda jiru. Isaan kun ergama fudhatanii ajaja Dambalash fi Shimallis faatiin calculate kara ta’een balleessu. Sana booda Shaneetu ajjeese jedhu. Iccitii toko sitti kaasa. Hogaansi dhalootaan Arsii ta’an baayyeetu Wallaggatti akka ajjeefaman ta’e. Kana kan godhe Shaneen akka Arsii hin seeneef Wallagi Arsii ajjeesee jedhanii walshakkisiisuuf ture.drama bay’ee godhe warri Abbaa torbee Motumma kuni.
Caasaa Motumma baay’ee ofumaa ajjeesanii gubanii Shaneetu godhe jedhani akka caasaan sodaatee warra WBO shakiifi ta’e.ummata keessaas nama guddaa ajjesee Motumma kun Shaneetu ajesse jedhe jibisiisuuf drama dalage.waltazaba baane.baankii zarafame jedhame suni akuma kabajmo Jeneral Kamal Galchu dubbate sana. Motummatu zarafe. Ragaa gahaatu jira. Maquma xiressuf ofii baankii amma mobile zarafuu n Shaneetu godhe jedhu.gaafa duraa ummanni amma Shanee jibbuti itti dhisaa jedhani ofiis Shanee fakkatani saamuu fi irraa qalachuu barbaadani. Wallagga amma buna kan funaanee kontorobaandii nagadu mootummaadha. Aka barbaadan buna bosonaa baafatu. Nama buna baafatu ajeesanii ofii gurguratu. Wallaga amma dinagdee mafiyaatu ta’ate jira. Isaaaniif dinagde Oromoof lubbuu taate. Amma wallaga qellamiif walaga Lixaa polisii Oromiyaa fi makkalaakiyaa giddu dantaa kontorobaandii bunaa fi warqees akkasuma albuda irratti waldhabdee qabu. Partii badhadhina amma yoo barbaade hoggana tokko abbaa torbee ofiitiin ajjeesee Shaneetu ajjeese jechuus danda’a. Warri WBO fi Abbaa torbee durii namoota uummata gidirsan nama baduu qaba jedhaan qoratanii balleessu malee calisanii hin godhanii.
Salamoon Tadasee maaliif Damballash akka ajjeesise Salamoon maaliin akka shakkame yeroo biraa siti deebi’a, daafii sanaanis Abdi ragasaa nyaatani. Amma wanti Damballash asii gadi nu ajaju ajjesaa, irmijja husadubat kan jedhudha, nuti ammoo polisiin balesaa jenna.polisoonni dhuga hasa’uuf hidhuu nuuf hin wayyuu jedhu. Abbaan rakoo polisii miti. Hogansi polisiin hin rakatani. Ajaja siyyaasati. Deninnatiitu bakka maratti waan daba ajajaa jira. Shaneen waan balleesse waan xixiqqoo hin dhabu. Garuu mana gubaa kan jiru humna mootummaa dha. Maatii warra bosona kan hidhu, ajjesu Motuma dha. Shanee gara jabatu jechuuf miseensa ofii gara jabinaan abba torbee ofiin balleessu. Kana Oromoof bareessi mee yaya. Chaw.”
Police Fake report
Komishiinin Poolisii Oromiyaa Humnoota Lixa Oromiyaa fi iddoowwan garaagaraatti yakka ajjeechaa fi saamicharratti boba’an 48 to’annoo jala oolchuu ibseera
I/A Komishiinaraa fi hoogganaan damee qorannoo yakkaa naannoo Oromiyaa Girmaa Galaan ibsa miidiyaaleef kenaniin humnoota maqaa Abbaa torbeetiin lubbuu namaa galaafachaa turan sakatta’iinsaa taasifameen to’annoo jala oolchuu ibsaniiru.
Badiiwwaan Godinaa Qeellaam , Naqamtee fi Magaalaa Burraayyutti raawwatamaa ture ilaalchisuun humnoota dhimmicharratti ajajaa turanii fi namoota gochichaa abbummaan raawwachaa turan too’annoo jala oolchuu ibsaniiru.
Dhimma kanarrattis mootummaan ragaa guutuu qabaachuu Komishiinar Girmaa Galaan ibsaniiru.
Humnoonni to’annoo jala oolan ajeechaa fi saamicharratti boba’un gocha badii kana ergamni itti kennamee raawwachaa turuu isaanii haala keeyyanni 35 ajajuun kan amanan ta’uu ibasan .
Humnootni kunniin tooftaalee afuritti gargaaramun badii raawwachaa kan turan ta’us ibsameera.Haaluma kanaan tooftan isaan itti gargaaraman keessaa tooftaa hidhannoo bosona keessaatti gargaaramuu,Human Abbaa torbee jedhuun lubbuu abbootii qabeenyaa fi angaa’ota mootummaa ajeesuu,maqaa akitiivistiitin peejii garagaraa fayyadamuun ummata burjaajessuu fi filannoo irratti human hidhannoo fayyadamuuf karoorfatanii kan socho’aa jiran ta’uu bira ga’ameera jedhan I/A komishiinaraa Girmaa Galaan.
Maqaa ABO Shaneetin hanga ammaatti Lixa Oromiyaa Qeellam keessattii namoonni 212 kan miidhaman yoo ta’ Magaalaa Sayyoo keessattis namoonni 114 humna kanaan ajeefamuu ibsaniiru.
Bal’ina Oduu kanaa galgala Miidiyaaleen kan darbu ta’uus gamanumaan isin beeksifna.
Qacceen Ofii Dhaaneeti Ofiimmoo Iyya – Jaal Marroo
Horoo Buloo Hoffolo9 says:
Ololaa fii odeeffatnoo tikaa akka gaariitti gargar baasnee beekna.Dunquqquu guyyaa keessaa tiin nama gowwoomsuuf dhamaatiin qeentee waan fudhatamu miti.Kuni tooftaa moofaa gadaan irra dabree dha.Ragaa qabatamaa hin qabdan malee osoo qabaattanii bakka isin geessuuf dursa kennitan ni beekna.